Ukuvaleka kwe-Suez kubiza izigidigidi eziyi-R6 ngehora | Scrolla Izindaba
Ukuvaleka kwe-Suez kubiza izigidigidi eziyi-R6 ngehora
NgoLwesibili, isivunguvungu somoya sishaye i-Ever Given, omunye wemikhumbi emikhulu kunayo yonke emhlabeni, wahamba, futhi wayovala ububanzi be-Suez Canal encane – okwenza enye yemigwaqo ematasa kakhulu yemikhumbi yama nse.
Umsele onobubanzi be-193km eGibhithe uxhuma ku-Red Sea ne-Meditterrenean, uhlinzeka ngesixhumanisi esifushane kakhulu phakathi kwe-Asia neYurophu futhi usingatha u-12% wakho konke ukuthunyelwayo emhlabeni wonke.
Imikhumbi engaphezu kwengama-300 ethwele impahla ebiza izigidigidi zamarandi njengamanje ibhajwe ohlangothini eluvinjiwe. Eminye imikhumbi isihanjiswe ngeminye imigwaqo kulo lonke elase-Afrika.
Abaphenyi bakwamanye amazwe bakholelwa ukuthi kungathatha amasonto ukuwuqaqa lo mkhumbi ongamamitha angama-400, njengoba zonke iziqukathi zawo ezingama-20 000 kungadingeka zisuswe idlanzana lama-cranes.
I-Lloyd’s List ilinganisela ukuthi ukuvinjelwa komsele i-Ever Given kubiza izigidi ezingama- $ 400 (izigidigidi eziyi-R6) ngehora.
Iphephabhuku lezindaba lokuthunyelwa kwempahla elizinze e-London liphinde lalinganisa inani lezimpahla eziwela kulo mfula nsuku zonke ngezidigidi eziyi- $ 5.1 (izigidigidi ezingama-R77 ) ezihambela entshonalanga izigidigidi eziyi- $ 4.6 (izigidigidi ezingama-R69 ) ezihambela empumalanga.
NgoMgqibelo izikebhe ezidonsa ezinye izikebhe eziyi-14 zidonse zahudulela i-Ever Given emanzini amaningi ngemizamo yokuyihlehlisa.
UGeneral uOsama Rabie, usihlalo we-Suez Canal Authority ubike ukuthi yize kunezinkinga ezibangelwe yimimoya enamandla namagagasi amakhulu, izikebhe ezidonsa ezinye izikebhe zikwazile ukuhambisa umkhumbi “ngama-degree angama-30 ukusuka kwesobunxele nakwesokudla.”
Izithombe zeTwitter zikhombisa ukuthi lezi zikebhe ezidonsayo zishaya izimpondo zazo kubungazwa lokhu kunqoba okuncane.
Umthombo wesithombe: @NASASpaceflight